ခရစ်ယာန်တွေ ဘယ်လိုသန့်ရှင်းနေနိုင်သလဲ | လေ့လာရန်ဆောင်းပါး
ခရစ်တော်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ တန်ခိုးတော်ဖြစ်
လူသားတွေကို ယေရှု ချစ်မြတ်နိုး
နမူနာဆုတောင်းချက်နဲ့အညီ အသက်ရှင်နေထိုင်ပါ—အပိုင်း ၁
နမူနာဆုတောင်းချက်နဲ့အညီ အသက်ရှင်နေထိုင်ပါ—အပိုင်း ၂
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဇွန် ၂၀၁၅
ဖတ်လို ကင်ဘွန်ဒူ ကမ္ဘောဒီးယား ကီချူဝါ (ကူဇ်ကို) ကီချူဝါ (အန်ကက်ရှ်) ကီချူဝါ (အိုင်ယာကူချို) ကွမ်ဂါလီ ကွမ်ယာမာ ဂရင်းလန်း ဂါ ဂါရီဖူနာ စပိန် စီပီဒိုင် ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆွာတီ ဇူးလူး တဆောန်ဂါ တလာပနက် တဟီတီ တိုဂျိုလာဘယ်လ် တိုတာနက် တွီ ဒန်မီ နာဝါ့တ် (မြောက်ပိုင်း ပီဘလာ) နာဝါ့တ် (ဟွာစတီကာ) နာဝါ့တ် (အလယ်ပိုင်း) ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဗန်ဒါ မမ် မားဇတက် (ဟွာ့တလာ) မုန် (အဖြူ) မော်လ်တီစ် မြန်မာ ရှိုစာ လင်ဂါလာ လာအိုတရန် အင်ဂါဘာရီ အင်ဇီမာ အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒွန်ဂါ အင်္ဂလိပ် အမ်ဘွန်ဒူ အာဖရိက အီတလီ အီဘန် အေးဝေး
‘သင်တို့၏လက်ကို သန့်ရှင်းစေကြလော့။ သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကို စင်ကြယ်စေကြလော့။’ —ယာ. ၄:၈။
အောက်ပါကျမ်းချက်တွေက သန့်ရှင်းနေနိုင်အောင် ဘယ်လိုကူညီပေးသလဲ
ယာကုပ် ၁:၁၄၊ ၁၅
၁။ ဘယ်အရာက လူများစွာအတွက် သမားရိုးကျဖြစ်လာသလဲ။
အကျင့်ပျက်လောကမှာ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်နေကြရတယ်။ ဥပမာ၊ လိင်တူဆက်ဆံတာ၊ လက်မထပ်ဘဲ လိင်ဆက်ဆံတာဟာ လူများစွာအတွက် သမားရိုးကျဖြစ်လာတယ်။ ရုပ်ရှင်၊ စာအုပ်၊ သီချင်းနဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ လိင်အကျင့်ပျက်မှု အပြည့်ပဲ။ (ဆာ. ၁၂:၈) ဒါပေမဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ နေနိုင်အောင် ယေဟောဝါ ကူညီပေးနိုင်တယ်။ အကျင့်ပျက်လောကမှာ ကျွန်တော်တို့ သန့်ရှင်းနေနိုင်ပါတယ်။—၁ သက်သာလောနိတ် ၄:၃–၅ ကိုဖတ်ပါ။
၂၊ ၃။ (က) မှားယွင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကို ဘာကြောင့် ငြင်းပယ်ရမလဲ။ (ခ) ဒီဆောင်းပါးမှာ ဘာအကြောင်း လေ့လာကြမလဲ။
၂ သန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ နေနိုင်ဖို့ဆိုရင် အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေကို ငြင်းပယ်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မစုံလင်သူတွေဖြစ်တာကြောင့် အကျင့်ပျက်မှုကို ခုံမင်မိနိုင်တယ်။ ငါးက ငါးစာကို ခုံမင်သလိုပဲ။ ဒါကြောင့် အကျင့်ပျက်အတွေးတွေ စပေါ်လာပြီဆိုရင် ချက်ချင်းထုတ်ပစ်ရမယ်။ အဲဒီလိုမထုတ်ပစ်ဘူးဆိုရင် အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေ ပြင်းထန်လာပြီး အခွင့်အရေးရတာနဲ့ အပြစ်ကျူးလွန်မိနိုင်တယ်။ “တပ်မက်မှုသည် သန္ဓေတည်သောအခါ အပြစ်ကို ဖွားတတ်၏” လို့ ကျမ်းစာပြောတယ်။—ယာကုပ် ၁:၁၄၊ ၁၅ ကိုဖတ်ပါ။
၃ စိတ်နှလုံးထဲမှာ မှားယွင်းတဲ့ဆန္ဒတွေ ကြီးထွားလာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်စတင်တပ်မက်လာတဲ့အရာကို သတိထားရမယ်။ မှားယွင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကို ငြင်းပယ်မယ်ဆိုရင် လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (ဂလ. ၅:၁၆) ဒီဆောင်းပါးမှာ မှားယွင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးမယ့်အရာသုံးခုအကြောင်း လေ့လာသွားပါမယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ယေဟောဝါနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းရှိခြင်း၊ ကျမ်းစာအကြံဉာဏ်ကို နားထောင်ခြင်းနဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေဆီက အကူအညီရယူခြင်းတို့ ဖြစ်တယ်။
၄။ ယေဟောဝါဆီ ချဉ်းကပ်ဖို့ ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ။
၄ “ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်” ချင်သူတွေဟာ “လက်ကို သန့်ရှင်းစေ” ရမယ်၊ “စိတ်နှလုံးကို စင်ကြယ်စေ” ရမယ်လို့ ကျမ်းစာပြောတယ်။ (ယာ. ၄:၈) ယေဟောဝါနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းရှိတာကို တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အပြုအမူတွေသာမက အတွေးတွေကိုပါ ကိုယ်တော်နှစ်သက်အောင် ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်နှလုံးလည်း သန့်ရှင်းနေပါလိမ့်မယ်။ (ဆာ. ၂၄:၃၊ ၄; ၅၁:၆; ဖိ. ၄:၈) ကျွန်တော်တို့ မစုံလင်ဘူး၊ အကျင့်ပျက်အတွေးတွေ တွေးမိနိုင်တယ်ဆိုတာ ယေဟောဝါ နားလည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေဟောဝါကို ဝမ်းမနည်းစေချင်တဲ့အတွက် မှားယွင်းတဲ့အတွေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ငြင်းပယ်ကြတယ်။ (က. ၆:၅၊ ၆) အတွေးအခေါ် ဆက်သန့်ရှင်းနေစေဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကြတယ်။
၅၊ ၆။ ဆုတောင်းခြင်းက အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေကို တွန်းလှန်ဖို့ ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲ။
၅ အကျင့်ပျက်အတွေးတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ ယေဟောဝါဆီ ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တော်ကူညီပေးလိမ့်မယ်။ သန့်ရှင်းနေနိုင်ဖို့ ခွန်အားရရှိအောင် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်ကို ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွေးတွေကို ယေဟောဝါနှစ်သက်စေချင်တယ်ဆိုတာ ဆုတောင်းတဲ့အခါ ပြောပြပါ။ (ဆာ. ၁၉:၁၄) အပြစ်ပြုမိစေနိုင်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့ဆန္ဒတွေ ရှိမရှိ သိနိုင်အောင် စိတ်နှလုံးကို စစ်ဆေးပေးပါလို့လည်း ဆုတောင်းနိုင်တယ်။ (ဆာ. ၁၃၉:၂၃၊ ၂၄) သွေးဆောင်မှုကြုံရချိန်မှာ အကျင့်ပျက်မှုကို တွန်းလှန်ပြီး မှန်ရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ကူညီပေးဖို့ ယေဟောဝါဆီ အမြဲဆုတောင်းပါ။—မ. ၆:၁၃ ။
၆ ယေဟောဝါအကြောင်း မသိခင်တုန်းက ကိုယ်တော်မကြိုက်တာတွေကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် လုပ်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုထိလည်း အဲဒီဆန္ဒတွေကို တွန်းလှန်နေရဆဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့၊ ယေဟောဝါနှစ်သက်ရာကို လုပ်နိုင်ဖို့ ကိုယ်တော်ကူညီပေးနိုင်တယ်။ ဥပမာ၊ ဘုရင်ဒါဝိဒ်ဟာ ဗာသရှေဘနဲ့ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမိတယ်။ နောက်ပိုင်း၊ နောင်တယူပြီး “စင်ကြယ်သောနှလုံး” ပေးဖို့၊ နာခံမှုရှိနိုင်အောင် ကူညီပေးဖို့ ယေဟောဝါဆီ အသနားခံခဲ့တယ်။ (ဆာ. ၅၁:၁၀၊ ၁၂) ကျွန်တော်တို့လည်း အရင်တုန်းက အကျင့်ပျက်မှုကို နှစ်ခြိုက်ခဲ့ပြီး အခုချိန်ထိလည်း အဲဒီဆန္ဒတွေကို တွန်းလှန်နေရဆဲ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ယေဟောဝါ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ကို နာခံနိုင်ဖို့၊ မှန်ရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကို ယေဟောဝါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ မစုံလင်တဲ့အတွေးတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကိုယ်တော်ကူညီပေးနိုင်တယ်။—ဆာ. ၁၁၉:၁၃၃။
စိတ်နှလုံးထဲမှာ အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေ စတင်ကြီးထွားနေပြီဆိုရင် ချက်ချင်းထုတ်ပစ်ပါ (အပိုဒ် ၆ ကိုကြည့်ပါ)
“တရားစကားတော်ကို ကျင့်သုံးသူများ ဖြစ်ကြလော့”
၇။ အကျင့်ပျက်အတွေးတွေကို ငြင်းပယ်ဖို့ ကျမ်းစာက ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲ။
၇ ယေဟောဝါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆုတောင်းချက်တွေကို ကျမ်းစာကတစ်ဆင့် ဖြေကြားပေးနိုင်တယ်။ ကျမ်းစာထဲမှာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ ဘုရားသခင့်ဉာဏ်ပညာ ပါရှိတယ်။ (ယာ. ၃:၁၇) နေ့တိုင်း ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါ စိတ်နှလုံးထဲမှာ သန့်ရှင်းတဲ့အတွေးတွေ ပြည့်နေပါလိမ့်မယ်။ (ဆာ. ၁၉:၇၊ ၁၁; ၁၁၉:၉၊ ၁၁) ကျမ်းစာမှာပါတဲ့ ပုံနမူနာတွေနဲ့ သတိပေးချက်တွေကလည်း အကျင့်ပျက်အတွေးတွေနဲ့ ဆန္ဒတွေကို ငြင်းပယ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
၈၊ ၉။ (က) လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ အကျင့်ပျက်မိန်းမနဲ့ ဘာကြောင့် မှားယွင်းမိသလဲ။ (ခ) သုတ္တံအခန်းကြီး ၇ မှာပါတဲ့ ဥပမာက ဘယ်အခြေအနေတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကူညီပေးနိုင်သလဲ။
၈ သုတ္တံ ၅:၈ မှာ အကျင့်ပျက်မှုကို ဝေးဝေးရှောင်ဖို့ သတိပေးထားတယ်။ သုတ္တံအခန်းကြီး ၇ မှာ အကျင့်ပျက်မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်နားကို ညဘက်မှာ ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ရတယ်။ ‘ပြည့်တန်ဆာလို ဝတ်ဆင်’ ထားတဲ့ အဲဒီမိန်းမဟာ လမ်းထောင့်နားမှာ လူငယ်လေးကို ထွက်ကြိုတယ်။ သူ့ကို ဖမ်းဆွဲပြီး နမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေ ထကြွလာစေမယ့်စကားတွေ ပြောတယ်။ လူငယ်လေးက အဲဒီဆန္ဒတွေကို မငြင်းပယ်တဲ့အတွက် သူနဲ့ မှားယွင်းမိတယ်။ အပြစ်လုပ်ဖို့ မရည်ရွယ်ပေမဲ့ လုပ်မိသွားတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားခဲ့ရတယ်။ အန္တရာယ်ကိုသာ သူကြိုမြင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီမိန်းမကို ဝေးဝေးရှောင်ပါလိမ့်မယ်။—သု. ၇:၆-၂၇။
၉ ကျွန်တော်တို့လည်း အန္တရာယ်ကို ကြိုမမြင်တဲ့အတွက် အခုနလူငယ်လိုပဲ မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမိနိုင်တယ်။ ဥပမာ၊ ညဘက်မှာ တချို့ရုပ်သံလိုင်းတွေက အကျင့်ပျက်အစီအစဉ်တွေ တင်ဆက်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုင်းမှာ ဘာပြနေတယ်ဆိုတာသိဖို့ လိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါလည်း အဲဒီလိုပဲ။ ချိတ်ဆက်ထားတာအားလုံးကို လျှောက်နှိပ်မယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ အကျင့်ပျက်ကြော်ငြာတွေနဲ့ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အင်တာနက်စကားဝိုင်းတွေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေထဲ ဝင်ကြည့်ခြင်းကလည်း အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘွားခနဲတွေ့လိုက်ရတဲ့အရာတွေက အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး အပြစ်လုပ်မိအောင် တွန်းပို့ပေးနိုင်တယ်။
၁၀။ အီစီကလီလုပ်ခြင်းက ဘာကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသလဲ။ (ဆောင်းပါးအစမှာပါတဲ့ ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။)
၁၀ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လိုပြုမူဆက်ဆံသင့်တယ်ဆိုတာ ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။ (၁ တိမောသေ ၅:၂ ကိုဖတ်ပါ။) ခရစ်ယာန်တွေဟာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လက်ထပ်မယ့်သူကိုသာ ချစ်ကြိုက်တဲ့အမူအရာတွေ ပြကြတယ်။ တခြားသူတွေကို ပရောပရည်မလုပ်ဘူး၊ အီစီကလီ မလုပ်ဘူး။ အထိအတွေ့ မပါသရွေ့ ကိုယ်နှုတ်အမူအရာနဲ့ အီစီကလီလုပ်တာဟာ အန္တရာယ်မရှိပါဘူးလို့ တချို့ထင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနှစ်ယောက် အီစီကလီလုပ်တဲ့အခါ အကျင့်ပျက်အတွေးတွေ ပေါ်လာနိုင်တယ်။ အဲဒါက အကျင့်ယိုယွင်းဖို့ တွန်းပို့ပေးနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ နမူနာတွေရှိတယ်။ အခုလည်း ထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
၁၁။ ယောသပ်ဆီကနေ ဘာသင်ယူရသလဲ။
၁၁ ယောသပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးပုံနမူနာ ဖြစ်တယ်။ ပေါတိဖာရဲ့မိန်းမက ယောသပ်ကို သူနဲ့အတူအိပ်ဖို့ သွေးဆောင်တယ်။ ယောသပ်ငြင်းပေမဲ့ အဲဒီမိန်းမကတော့ လက်မလျှော့ဘူး။ ‘သူနဲ့အတူအိပ်’ ဖို့ နေ့တိုင်းသွေးဆောင်တယ်။ (က. ၃၉:၇၊ ၈၊ ၁၀) နှစ်ယောက်တည်းသာရှိမယ်ဆိုရင် သူ့ကို ယောသပ်တပ်မက်လာနိုင်တယ်လို့ အဲဒီမိန်းမ မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ကျမ်းပညာရှင်တစ်ယောက် ပြောတယ်။ ယောသပ်ကတော့ အဲဒီမိန်းမ အီစီကလီလုပ်တာကို ဘာမှမတုံ့ပြန်ဖို့၊ ပြန်ပြီးအီစီကလီမလုပ်ဖို့ အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ စိတ်နှလုံးထဲမှာ အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ယောသပ်အခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံး၊ ယောသပ်ရဲ့အဝတ်ကိုဆွဲပြီး သူနဲ့အတူအိပ်ဖို့ အဲဒီမိန်းမ အတင်းကြိုးစားချိန်မှာ ယောသပ်ဟာ ချက်ချင်းပဲ “အဝတ်ကိုစွန့်၍ ပြင်သို့ထွက်ပြေး” ခဲ့တယ်။—က. ၃၉:၁၂။
၁၂။ ကြည့်ရှုတဲ့အရာက စိတ်နှလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိရသလဲ။
၁၂ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတဲ့အရာက စိတ်နှလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်၊ အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီး ယေရှုသတိပေးခဲ့တယ်။ “မိန်းမတစ်ဦးကို ဆက်ကြည့်နေ၍ တပ်မက်သောစိတ်ပေါ်လာလျှင် စိတ်နှလုံးထဲ၌ ထိုမိန်းမနှင့် ဖောက်ပြန်ပြီ” လို့ ယေရှုပြောတယ်။ (မ. ၅:၂၈) ဘုရင်ဒါဝိဒ် အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ‘အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရေချိုးနေတာကို နန်းတော်အမိုးပေါ်ကနေ သူလှမ်းတွေ့လိုက်တယ်။’ ချက်ချင်းအကြည့်လွှဲလိုက်မယ့်အစား ဆက်ကြည့်ပြီး ဆက်တွေးခဲ့တယ်။ (၂ ရာ. ၁၁:၂၊ ကဘ) ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်မှန်း သိသိကြီးနဲ့ သူ့ကိုတပ်မက်လာပြီး အတူအိပ်ခဲ့တယ်။
၁၃။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်စိနဲ့ ‘ပဋိညာဉ်ပြု’ ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ။
၁၃ အကျင့်ပျက်အတွေးတွေကို ငြင်းပယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ယောဘရဲ့ပုံနမူနာကို တုပရမယ်။ ‘ငါသည် ကိုယ်မျက်စိနှင့် ပဋိညာဉ်ပြုပြီ’ လို့ ယောဘပြောတယ်။ (ယောဘ ၃၁:၁၊ ၇၊ ၉) ယောဘလိုပဲ ကျွန်တော်တို့လည်း တခြားတစ်ယောက်ကို မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ မကြည့်မိဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားရမယ်။ ကွန်ပျူတာမှာဖြစ်စေ၊ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်မှာဖြစ်စေ၊ မဂ္ဂဇင်းမှာဖြစ်စေ ဘယ်နေရာမှာမဆို အကျင့်ပျက်ရုပ်ပုံတွေ တွေ့မိရင် ချက်ချင်း အကြည့်လွှဲပစ်ရမယ်။
၁၄။ ဆက်သန့်ရှင်းနေဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။
၁၄ အခုထိ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အရ ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာ အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေကို ပိုတွန်းလှန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သင် သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်ရင် ချက်ချင်းပြောင်းလဲပါ။ ကျမ်းစာမှာပါတဲ့ ယေဟောဝါရဲ့အကြံဉာဏ်ကို နာခံခြင်းအားဖြင့် လိင်အကျင့်ပျက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ဆက်သန့်ရှင်းနေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။—ယာကုပ် ၁:၂၁–၂၅ ကိုဖတ်ပါ။
၁၅။ အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေကို တွန်းလှန်ဖို့ ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင် အကူအညီတောင်းဖို့ ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ။
၁၅ အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေကို တွန်းလှန်ဖို့ ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင် အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ သက်တမ်းကြာခရစ်ယာန်တွေ၊ ကျမ်းစာကိုသုံးပြီး အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးနိုင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာတွေအကြောင်း တခြားသူတွေကို ပြောပြရတာ လွယ်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကူအညီတောင်းဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ (သု. ၁၈:၁; ဟေဗြဲ ၃:၁၂၊ ၁၃) ရင့်ကျက်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေက ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာ သင် ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိလာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် ယေဟောဝါနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်း ဆက်ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁၆၊ ၁၇။ (က) အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေကို တွန်းလှန်ဖို့ အခက်တွေ့နေသူတွေကို အကြီးအကဲတွေ ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲ။ ဥပမာပေးပါ။ (ခ) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ ကြည့်ရှုသူတွေဟာ ချက်ချင်းအကူအညီတောင်းဖို့ ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ။
၁၆ အထူးသဖြင့် အသင်းတော်အကြီးအကဲတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ အရည်အချင်းပြည့်မီတယ်။ (ယာကုပ် ၅:၁၃–၁၅ ကိုဖတ်ပါ။) ဘရာဇီးနိုင်ငံက လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ အကျင့်ပျက်ဆန္ဒတွေကို တွန်းလှန်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ “ကျွန်တော့်အတွေးတွေကို ယေဟောဝါ မကြိုက်ဘူးဆိုတာ သိတယ်။ တခြားသူတွေကို ပြောပြရမှာလည်း သိပ်ရှက်တယ်” လို့ သူပြောတယ်။ သူအကူအညီလိုအပ်နေမှန်း အကြီးအကဲတစ်ယောက် သတိပြုမိတယ်။ ဒါနဲ့ အကြီးအကဲတွေဆီမှာ အကူအညီတောင်းဖို့ သူ့ကို အားပေးတယ်။ “အကြီးအကဲတွေ ဘယ်လောက်ကြင်နာတယ်ဆိုတာ သိရလို့ အံ့သြမိတယ်။ ကျွန်တော်ထင်ထားတာထက် အများကြီးကြင်နာပြီး နားလည်ပေးကြတယ်။ ပြဿနာတွေကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ယေဟောဝါချစ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ချစေဖို့ ကျမ်းစာသုံးပြီး ပြောပြကြတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ဆုတောင်းကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ပေးတဲ့ ကျမ်းစာအကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံဖို့ တအားလွယ်ကူသွားတယ်” လို့ပြောတယ်။ ယေဟောဝါနဲ့ ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်း သူအခုလိုပြောတယ်– “ပြဿနာတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကျိတ်ဖြေရှင်းမယ့်အစား အကူအညီတောင်းဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ အခုနားလည်သွားပြီ။”
၁၇ သင့်မှာ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ ကြည့်ရှုတဲ့အကျင့်စွဲနေတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်း အကူအညီတောင်းပါ။ အကူအညီတောင်းဖို့ အချိန်ဆွဲလေ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းတဲ့အပြစ် ကျူးလွန်မိဖို့ အန္တရာယ်များလေပဲ။ အဲဒီအခါ တခြားသူတွေကို ထိခိုက်မိနိုင်တယ်။ ယေဟောဝါရဲ့နာမည်လည်း ရှုတ်ချခံရနိုင်တယ်။ ညီအစ်ကိုညီအစ်မများစွာဟာ ယေဟောဝါရဲ့ နှစ်သက်မှုရဖို့၊ အသင်းတော်ထဲ ဆက်ရှိနေဖို့ အကြီးအကဲတွေဆီ အကူအညီတောင်းပြီး သူတို့ရဲ့ အကြံဉာဏ်ကို လက်ခံခဲ့ကြတယ်။—ဆာ. ၁၄၁:၅; ဟေဗြဲ ၁၂:၅၊ ၆; ယာ. ၁:၁၅။
၁၈။ သင် ဘာလုပ်ဖို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားသလဲ။
၁၈ စာတန့်လောကဟာ တစ်နေ့တခြား ပိုအကျင့်ပျက်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေဟောဝါရဲ့ကျေးကျွန်တွေကတော့ အတွေးအခေါ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။ အဲဒီခရစ်ယာန်တွေအတွက် ယေဟောဝါ သိပ်ဂုဏ်ယူတယ်။ ဒါကြောင့် ယေဟောဝါနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေကြပါစို့။ ကျမ်းစာနဲ့ အသင်းတော်ကတစ်ဆင့် ကိုယ်တော်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကို လက်ခံကြပါစို့။ ဒီနည်းအားဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုခံစားရပြီး ကြည်လင်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သိစိတ် ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (ဆာ. ၁၁၉:၅၊ ၆) အနာဂတ်မှာလည်း စာတန်ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ကမ္ဘာသစ်မှာ ထာဝစဉ်အသက်ရှင်ရပါလိမ့်မယ်။
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း– မသန့်ရှင်းတဲ့အတွေးတွေကို ငြင်းပယ်ခြင်းနဲ့ မှားယွင်းတဲ့လိင်ဆန္ဒတွေနောက် မပါသွားခြင်းဖြစ်တယ်
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇွန် ၂၀၁၅